खराब राजनीतिले पछि पारिएको गुल्मी « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७४, १ मंसिर १५:१६
गुल्मी जिल्ला आफैमा एउटा सुन्दर शान्त पहाडी क्षेत्र हो । बुटवल देखि करिब ६५ किलोमिटर र काठमान्डू देखि करिब ३२० किलोमिटर को दुरीमा रहेको गुल्मीमा पवित्र तिर्थस्थल रिडी र रेशुंगा अवस्थित छन् । त्यस्तै कफीको लागि पनि गुल्मी प्रख्यात मानिन्छ ।तम्घास बाट करिब २० किलोमिटर को दुरीमा रहेको धुर्कोट बिचित्र गुफा पनि गुल्मी जिल्लालाई चिनाउने एउटा आधार हो ।
प्रशस्त पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गुल्मी अन्य जिल्ला हरुको तुलनामा अबिकशित त विकट मानिन्छ । त्यसो त गुल्मी जिल्ला आफैमा शिक्षित जामात् रहेको जिल्ला पनि हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ को उपसचिब कुलचन्द्र गौतम केही पटक मन्त्री भएका गोकर्ण बिस्ट प्रदिप ज्ञावाली तथा विभिन्न सरकारी सेवा मा सचिव उपसचिब हरू धेरै सफल व्यक्तित्व गुल्मी जिल्ला ले जन्माई सकेको छ । सायद गुल्मेली हरू नपुगेको देश पनि कमै होलान् ।
जिल्लाको साबिकको क्षेत्र न ३ त झन् धेरै समस्याले ग्रसित छ न त कालो पत्रे गरेको सडकनै पुगेको छ न त कुनै ठुलो स्वास्थ्य संस्था छ न त गतिलो उच्च शिक्षा को लागि क्याम्पस । बर्सेनि उच्च शिक्षा को खोजीमा तम्घास पाल्पा बुटवल काठमाडौँ पलाएन हुने युवा दिनदिनै बढिरहेका छन् । यसरि सबै क्षेत्र मा पछि पारिएको गुल्मी जिल्लामा प्रशस्त सम्भावना हुदाहुदै पनि विकास र निकासको बाटो देखाउने नेतृत्व को कमी छ।
विकासमा ध्यान दिने नेतृत्वको कमीले गुल्मी जिल्ला पछि पारिएको हो ! खराब राजनीतिक प्रणालीले जिल्लामा दिनप्रतिदिन कमिसनखोर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यसतर्फ सबै पक्षको ध्यान जानु पर्ने जरुरी छ ! युवा बुद्धिजीवी समाजसेवी सबै पक्ष को समान हैसियत सहन्छा सम्बृद गुल्मी निर्माणमा ।